Home Wararka Al Shabaab oo weerartay saldhiga ciidanka AMISOM ee deegaanka Ceelwaaq
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya deegaanka Ceelwaaq, khasaare k ayaa a dhashay weerar ku billowday qarax xoogan oo xalay ka dhacay qeybo ka mid ah degmada Ceelwaaq oo ka tirsan gobolka Gedo ee koonfurta dalka Soomaaliya. Weerarkan oo ay qaadeen dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa lala beegsaday saldhig ciidamada Kenya ee qeybta ka ah AMISOM ay ku leeyihiin gudaha degmadaasi.
Sida ay MOL u xaqiijeen dad degan degaanka weerarka kdacay ayaa sheegay in weerarka kadib uu xigay dagaal foola fool ah oo dhex-maray labada dhinac, kaas oo la’isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Ma cadda inta uu la’egyahay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi iyo weerarka ka horreeyey, waxaana dadka soo wajahay cabsi xoogan, kadib weerarkaasi.
Ururka Al-Shabaab ayaa war ay ka soo saareen dagaalkaas ku sheegay inay ku dishay askar ka tirsanaa ciidamada Kenya oo uu ku jiro sarkaal laba Xiidgle ah, sida ay hadalka u dhigtay. Dhanka kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha AMISOM, gaar ahaan ciidamada Kenya oo ku qaadan weerarkaasi khasaaraha lagu gaarsiiyey.